FIHEMORAN’NY FIFIDIANANA : Mijanona eo amin’ny toerany ihany ireo ben’ny tanàna
Manohy ny andraikiny amin’ny fampandehanana ny raharaha rehetra eo anivon’ny Kaominina notantaniny ihany ireo ben’ny tanana mandra-pisian’ny fifidianana. Io no fantatra tao anatin’ilay tatitra navoakan’ny Minisiteran’ny atitany tamin’ ny fiandohan’ity herinandro ity. 31 juillet 2019
Ny 18 septambra izao no hifarana ny fe-potoam-piasan’ireo ben’ny tanàna. Tsy tokony hisy fahabangana anefa ny fitantanana ny Kaominina. Tokony efa hirosona ny fifidianana izay ho ben’ny tanàna handimby ireo nahavita ny asa nandritra ny efa-taona saingy hisy fihemorana amin’ny fotoana tsy fantatra izany. Raha ny vaovao miely dia tombanana any amin’ny taona 2020 any mihitsy vao hotanterahina ny fifidianana izay ho mpitantana voalohany eny anivon’ny Kaominina miaraka amin’ireo mpanolontsaina kaominanaly.
Nisy manoloana izany ny tatitra navoakan’ny Minisiteran’ny atitany, izay nilaza fa mijanona eo amin’ny toerany avokoa ireo ben’ny tanànan’ny Kaominina rehetra manerana ny Nosy. Manohy ny asany izy ireo amin’ny fampandehanana ny raharaha eny anivon’ny Kaominina amin’ny ankapobeny sy ny fikarakarana ny tanàna mandra-pahatanteraky ny fifidianana. Araka izany dia tsy misy ny fanendrena filohan’ny delegasionina manokana (PDS) hitantana ny Kaominina fa ireo ben’ny tanàna teo aloha ihany no manohy ny asany. Misy anefa no milaza fa kajikajy politika no antony nanemorana ny fifidianana. Nambaran’izy ireo fa hahemotra ny fifidianana mba ahafahana manendry PDS, ka ity farany ihany avy eo no arotsaka ben’ny tanàna. Ity tatitra navoakan’ny Minisiteran’ny atitany ity anefa dia nandiso tanteraka izany fanadihadiana politika diso fipetraka izany. Antony nanemorana ny fifidianana ny tsy maintsy hanovana ny sata mifehy ny Kaominina sy ny isan’ireo mpanolotsaina ho an’ny Kaominina tsirairay avy.
Hisy ihany koa ny fanavaozana ny lisi-pifidianana. Ankoatra ireo havaozina mifandraika amin’ny politikam-panjakana ihany koa ny fitantanana ny Kaominina, tokony hitombo ny isan’ny Kaominina hanaraka ny fitombon’ny mponina. Nanambara ny Minisiteran’ny atitany fa betsaka ireo olana niseho tamin’ireo fifidianana nifandimby teo aloha, ka ilaina ny fandraisan’andraikitry ny minisitera amin’ny fanarenana sy ny famahana izany. Raha tsiahivina dia ny 28 oktobra izao no vinavinana tetiandro naroson’ny Ceni hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna. Mila 90 andro aorinan’io anefa ny fiantsoana ny mpifidy amin’ny alalan’ny didim-panjakana avoakan’ny Filoham-pirenena. Raha hatao ny kajy dia ny 28 jolay lasa teo no tokony nivoahan’izany didy izany. Fantatra fa tsy raikitra amin’io daty naroson’ny Ceni io indray ny fifidianana kaominaly satria tsy tafapetraka io 90 andro voalaza etsy ambony io.